Sina latsaka amin'ny vakana fitaratra BS6088B fanamboarana sy orinasa | olan
Noho ny fisian'ny vakana fitaratra eo amboniny izay taratry ny jiron'ny fiara, môtô ary bisikileta, vakana fitaratra marika amoron-dalana no ampiasaina hitarika ny mpampiasa arabe ao anaty haizina. Rehefa mitondra fiara amin'ny alina dia miverina eo amin'ny mason'ny mpamily ny andrin-jiro ka ahafahan'ny mpamily mahita tsara ny lalana mialoha ary mitondra soa aman-tsara. Mba hamerenan'ny vakana ny hazavana dia ilaina ny fananana roa: mangarahara sy boribory. Ny vakana vita amin'ny vera dia manana ireto toetra roa ireto: ny filàna mangarahara sy ny boribory dia hita fa manan-danja raha manaraka ny lalan'ny hazavana ianao rehefa miditra amin'ny vakana tafiditra ao anaty marika marika. Ny vakana fitaratra dia tsy maintsy mangarahara mba hahafahan'ny hazavana mivoaka sy mivoaka ny sehatra. Rehefa miditra amin'ny vakana ny tara-pahazavana dia esorina amin'ny faritra boribory amin'ny vakana izay tafiditra ao anaty loko. Ny hazavana mamely ny lamosin'ny vakana vita amin'ny loko vita amin'ny loko dia hita taratra avy eny ambonin'ny loko, ary ampahany kely amin'ny jiro miverina mankamin'ny loharano fanazavana.
Mba hiantohana ny fahitana avo lenta amin'ny toetr'andro rehetra, Olan dia namorona tandavan-bitsika fitaratra isan-karazany mety amin'ny karazana fampiharana tsirairay.
Misy naoty roa iraisana mandritra ny fampiharana: Premix sy Drop-on
Premix (Intermix), izay afangaro amin'ny loko alohan'ny hialana amin'ny lalana. Rehefa mitafy ny sosona loko, dia miharihary ireo vakana manome ny fahitana tsara kokoa ny marika amin'ny lalana.
Drop-On, natsipy teo ambonin'ny tampon'ny loko vao esorina eny an-dàlana mba hanomezana fahitana haingana ny mpamily alina.
Ny fahitana antoandro ary koa mandritra ny alina amin'ny toetr'andro isan-karazany, ny fahombiazan'ny anti-skid, ny fanoherana ary ny faharetana dia toetra mampiavaka ny marika tsara. Olan dia mamokatra vakana fitaratra amin'ny karazana vokatra rehetra manamarika arabe toy ny loko misy ny solvent sy ny rano, ny thermoplastics ary ny rafitra mpiorina 2.
Previous: Vakana fitaratra 1.7 ho an'ny fanamarihana ny lalana
Manaraka: Vakana vita amin'ny vera vita amin'ny vera
Mitete amin'ny vakana fitaratra ho an'ny marika manamarika eny amin'ny arabe
T446-2001 Midina amin'ny fanamarihana ny lalana